Kiraysiga Abaarmen – Khayraad Caawinaya Kireeyayaasha iyo Kiraystayaasha oo ku qoran Luuqadda
Kiraysiga abaarmen wuxuu noqon karaa hab adag oo wareer ah. Dokumentiyda halkan lagugu siiyey waxa ku yaala macluumaad faa’ido u yeelan karaa kireeyayaasha iyo kiraystayaasha si habku mid fudud u noqdo. Xidhiidhin kasta oo hoose waxay ku siinaysaa dokumentiyada sida la sheegay.
Nooca Kirada – kani waa muunad heshiis kaasoo kireeyeyaashu inta badan u baahan yihiin markay abaarmen kiraynayaan
Liiska Warbixinta Kormeerka Galista/ka Bixista Guryeynta – Liiskan warbixintu wuxuu ka caawin karaa kiraystaha iyo kireeyaha inay gartaan wixii dhibaato ka jirta guriga ama abaarmenka intaanu kiraystuhu soo galin. Tani waxay gacan ka gaysanaysaa ka fogaanshaha khilaaf kusaabsan deebaajiga oo marka dambe qarxa.
Mudadda Deebaajiga – Kiryeeyayaasha badankoodu waxay rabaan deebaaji. Dokuemtigan waxa ku qoran soojeedimo kusaabsan marka ay tahay inaad fisho in qaybaha kala duwan ee habkani dhacaan.
Tilmaamta Dhaawacyada iyo Rifanka iyo Lisanka Caadiga ah – Marka kiro dhammaato kiraystuhuna ka baxo guri ama abaarmen, kireeyuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu haysto qayb kamida deebaajiga haddii kiraystuhu dhaawacay abaarmenka. Dokumentigan waxa ku qoran macluumaad meelmar leh oo kusaabsan waxa loo yaqaan "rifanka iyo lisanka caadiga ah" iyo waxa loo yaqaan "dhaawacyo."
Codsiga Kiraystaha ee Dayactir – Kiraystayaashu waxay u isticmaali karaan foomkan inay kaga codsadaan kireeyahoogu inuu sameeyo dayactirro gaar ah oo looga baahan yahay guriga ay kiraysteen.
Aasaaska Shuruucda Kireeyaha-Kiraystaha ee Seattleites – Magaalada Seattle, waxa jira shuruuca gaar ah oo loogu talogalay kireeyayaasha iyo kiraystayaasha. Dokumentigani wuxuu sharxayaa waxa shuruucdani sheegayaan.
Page Loaded: 12/18/18 07:35 (Pacific Time) - Version 4.0